Wasiir Fiqi: Waa yaabe sidee loo kala sareeyaa Xukuumadda? | KEYDMEDIA ONLINE
Wasiir Fiqi: Waa yaabe sidee loo kala sareeyaa Xukuumadda?
Isku dhex yaac xooggan ayaa ka muuqda Xukuumadda Xil-gaarsiinta, waxaana tan iyo markii muddada loo kordhiyay hay’adaha Dowladda soo if baxay is bar bar yaac iyo kala mar qaadasho la’aan.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasiirka Amniga Galmudug, Axmed Macalin Fiqi, ayaa is weydiiyay sida loo kala sarreeyo Xukuumadda uu Rooble hoggaamiyo, kadib soo if-baxa is bar bar yaac xoogan oo ka dhex jira Xukuumadda xil-gaarsiinta.
Hadalka Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi, ayaa ku soo aadaya kadib markii uu shalay Sii-hayaha Xilk Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Roobe uu ku dhawaaqay xabad joojin, hayeeshee uu maanta Sii-hayaha Xilka Wasiirka Amniga Xudumey, iclaamiyay dagaal ka dhaca Caasimadda.
“Mar kasta ee uu RW Rooble hadlo waxaa hadalkiisa mid khilaafsan ka daba dhaha wasiirkiisa amniga Xundubey, Shalay Rooble wuxuu ku dhawaaqay xabbad joojin, maantana Xundubey wuxuu iclaamiyey dagaal. Waa yaabe sidee loo kala sareeyaa xukuumadan”? Ayuu yiri, Axmed Macalin Fiqi.
Wasiirka Amniga Galmudug, wuxuu layaab ku tilmaamay, hadalka Wasiir Xudumay, ee uu dagaalka Muqdisho ku xalaaleysanayo, “wax baa la bililiqeystay”, wuxuuna xasuusiyay in aysan jirin bililiqo ka weyn kursigii dalka looga talinayey oo Xoog lagu heysto.
“Asagoo kursi bililiqo ah difaacaya inuu cid kale ku eedeeyo wax bay bililiqeysatay ma ahayn, bililiqada kaliya ee dagaal in lagu qaado mudan waa midda ka jirta Villa Soomaaliya”. Ayuu hadalkiisa ku sii daray Xidhibaan Fiqi.
Arrintaan ayaa bannaanka soo dhigeysa in Rooble uusan u talin Xukuumaddiisa oo kooxo kale maamulaan, waxaana hore dhowr jeer loo dareemay hadallo kala duwan oo kasoo baxay Xukuumadda dhexdeeda.